Valve ကိုသူ့ခေါင်းပေါ်-တပ်ဆင်ထား display ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေသလဲ?
အဆိုပါ VR-တစ်ဝက်-ဘဝကဗားရှင်းရဲ့ကောလာဟလပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကကွန်ယက်ဟာရှေ့ပြေးပုံစံခေါင်းကို-တပ်ဆင်ထား display ကိုပုံဖော်ထားသည့်ဓာတ်ပုံများ, ရှိပါတယ်။ အဆိုပါပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင် Valve ကုမ်ပဏီလိုဂိုတစျခုတှငျ။ အခြားဓါတ်ပုံ frame ကိုဝင်ကြ၏သောကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာရက်စွဲ, ပုံယခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
လူအတော်များများဟာယနေ့အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေသည်: အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံငွေသားထုတ်ယူသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းသူတို့ကိုမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးချေရန်ရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးငွေပေးချေမှုစနစ်များတစ်ခုမှာ - WebMoney (Webmoney) ။ ဒါဟာသင်နီးပါးမည်သည့်ငွေကြေးနှင့်ညီမျှပိုက်ဆံအိတ်, ဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်လည်းအီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံ cashing ၏နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါကွန်ယက်သစ်ကိုဇာတ်ကောင်နောက်တွဲယာဉ် Soulcalibur VI ကိုရတယ်ထားပါတယ်
Namco Bandai မတော်တဆမိမိအလာမည့်တိုက်ပွဲများဂိမ်း၏ ... မရပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အခြားသူရဲကောင်းဖွင့်လှစ်! စပိန်ပင်လယ်ဓားပြ Cervantes က de လီယွန် - ကုမ္ပဏီ Namco Bandai အမေရိကန်ဌာနခွဲ၏တရားဝင်တွစ်တာ-အကောင့်မှားယွင်းစွာယခင်ကဂိမ်း Soulcalibur VI ကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်များကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပြသောနောက်တွဲယာဉ်မှ link တစ်ခုနှင့်အတူတစ် tweet ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Intel ရဲ့အသစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပရိုဆက်ဆာ Core များအစုလိုက်အပြုံလိုက်အကြားဖြစ်လိမ့်မည် i9-9900K
အဆိုပါ LGA1151 ပလက်ဖောင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးရှစ်-Core Intel Core i9-9900K အဖြစ်လူသိများ, ထိုသို့ရောင်းချအပေါ်အနည်းငယ်မော်ဒယ်များ "နဝမ" စီးရီးသှားလိမျ့မညျနှင့်အတူပါလိမ့်မည်။ WCCFtech နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းစာအဆိုအရ, သစ်ကိုချစ်ပ်များအတွက် system ကိုယုတ္တိဗေဒ Z390 တစ်လတ်ဆတ်တဲ့အစုအပေါ်တစ်ဦး Motherboard ကလိုအပ်ပါတယ်။
Video card အရောင်အသွေးစုံသော iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan တန်ဖိုးရှိအမေရိကန် $ 3000
ရောင်စုံတရုတ်ကုမ္ပဏီ $ 3000 ရကျိုးနပ်သောဗီဒီယို iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan ရောင်းတော့တာပဲ။ အသစ်အဆန်း, 1000 မိတ္တူ၏ကန့်သတ်ထုတ်ဝေ Buy, ထိုကုန်သွယ်ကြမ်းပြင် jd.com အပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရောင်စုံ iGame GeForce RTX လေအေးနဲ့ရေပိတ်ပင်တားဆီးမှုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဟိုက်ဘရစ်အအေးစနစ်တပ်ဆင်ထား 2080 Ti Kudan ရောင်စုံ iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan ။
အကောင်းဆုံးကိုကြော်ငြာ၏ဆယ်ပါး - 2018
Advertising ကြော်ငြာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်ကြော်ငြာများ၏ဖန်တီးရှင်စာသားအရာအားလုံးဆန္ဒရှိနေကြသည်, သူမ၏ပရိသတ်အာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်။ 2018 အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးကြည့်ရှုအားပေးအဘယ်အရာကိုကြော်ငြာရှိပါသလဲ အမေဇုံ Super Bowl LII ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်2- မာတိကာ 1. Alexa သူမရဲ့ Voice ကိုရှုံးသည်။
ဟက်ကာ WhatsApp ကိုအသံစာကိုအတူအကောင့်ခိုးယူ
အမျိုးသားအေဂျင်စီမှဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဣသရေလအမျိုးသားတမန် WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူများအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဟုပြောသည်။ ရာဇဝတ်ကောင်န်ဆောင်မှုအကောင့်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်သိမ်းယူကာကွယ်ပေးရန်စကားသံကိုမေးလ်စနစ်ကွာဟချက်နှင့်အတူ။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်နှင့်အမျှဟက်ကာများ၏သားကောင်များဆယ်လူလာအော်ပရေတာအသံစာပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိတ်ဆက်သောသူတို့သည်အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြပေမယ့်သူမ၏စကားဝှက်အသစ်အဘို့မမေးခဲ့ချေ။
လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလဲခြင်း cryptocurrency ဆယ်
စစ်ဆင်ရေးမကြာသေးမီကင်ငွေကောင်းတစ်ခုမျိုးဖြစ်လာ cryptocurrency ။ သူတို့ကနည်းပညာပိုင်းအဆင့်မြင့်နိုင်ငံများအတွက်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များကြသည်။ ရုရှားအတော်လေးမကြာသေးမီကကမ္ဘာကြီးကို cryptocurrency ပူးပေါင်းပြီ, နှင့် "ကို virtual ပိုက်ဆံဆိုင်းဘုတ်များ" နဲ့အများကြီးစစ်ဆင်ရေးသေးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခက်ခဲဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုမှာ - က "သာမန်" ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ရူဘယ်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကိုတပ်ဘာသာပြန်ချက်။
Yandeks.Toloka - အွန်လိုင်းဝင်ငွေမှတဦးတည်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုက်ညီမှုဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. သုံးသပ်ချက်များ: တစ်စုံတစ်ဦးကသူတနေ့လုံးအလုပ်အပေါ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပင်တရာရူဘယ်ဝင်ငွေမညညျးညူနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးက cleanup ဝင်ငွေ၏အဓိကအရင်းအမြစ်စေရန်စီမံခန့်ခွဲ။ ဘယ်လောက်ငါသည်ဤစီမံကိန်းကို Yandex မှတဆင့်ဝင်ငွေရနိုင်သလဲ
ကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု Valve ၏စွပ်စွဲချက်မှအဆိုပါရှေးဟောင်းပစ္စည်းအတွက်ကတ်များတစ်ဦး၏အမည်ကိုပြောင်းလဲသွား
Valve ကုမ္ပဏီကဒ်ဂိမ်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းလာမည့်လွှတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ဆက်လက်နှင့်, တင်ပြကဒ်များထဲမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းကစားသမားမကြိုက်ကြဘူးဖြစ်ပါတယ်။ Valve ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထင်ရှားသောအမည်နှင့်ကဒ်ရဲ့ Crack နှင်တံ ( "နှင်တံကိုကလစ်နှိပ်ပါ"), ထိုဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းအကြားတစ်ဦးကအနုတ်တုံ့ပြန်မှုစေ၏။
"Elbrus" Rostec အပေါ်အကြီးစားတာဝန်လက်ပ်တော့ 500 တထောင်ရူဘယ်မှာခန့်မှန်း
ပြည်တွင်း Processor ကို၏အခြေခံပေါ်မှာ protected ဒီဇိုင်း Rostec လက်တော့ "Elbrus 1C +" ကိုဖောက်သည်ကုန်ကျမည်, ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားများထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုပြီးစျေးကြီးသည်။ အစိုးရပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏စာနယ်ဇင်းဝန်ဆောင်မှု 500 တထောင်ရူဘယ်ရန်အခြေခံငွေပမာဏအတွက်ကိရိယာ၏ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်။ laptop ES1866 ကျဇယားထိတ်လန့်, တုန်ခါမှုနှင့်ရေ ingress အပါအဝင်အပူချိန်နှင့်ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများတစ်ခုကျယ်ပြန့်, withstanding နိုင်စွမ်း enclosure တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။
အသစ် Diablo တစ်ခုတည်းဂိမ်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော
တဦးတည်း Reddit အသုံးပြုသူပင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ရသေးသည့် Diablo ၏အသစ်အစိတျအပိုငျးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်တင်ခဲ့သည်။ စာရေးသူအဆိုအရ, သူနဲ့သူ့ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချို့သည်ကိုသိ "Blizzard ၏မိတ်ဆွေ related" ။ ဒီတော့ Diablo4သော်လည်းလုံးဝ multiplayer ဂိမ်းဖြစ်နှင့်တစ်ဦး isometric ရှုထောင့်နှင့်ဂိမ်း၏တံခါးသော့ကိုအင်္ဂါရပ်များစောင့်ရှောက်မည်။
နယူး Bose ကိုကြိုးမဲ့နားကြပ်အိပ်မပျော်ကျော်လွှားကူညီ
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Bose ကိုကြိုးမဲ့နားကြပ်များရောင်းချမှုအိပ်မပျော်တိုက်ဖျက်ဖို့ဒီဇိုင်းဆူညံသံ-ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း Sleepbuds, ကြေညာခဲ့သည်။ $ 250 ၏ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်အိပ်ပျော်ခြင်းနှောင့်ယှက်, နောက်ခံဆူညံသံပိတ်ဆို့နှင့်စိတ်ပြေလျော့အသံနဲ့ဂီတကစားရန်တတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေများ Bose ကိုဆူညံသံ-ဖုံးကွယ်ထားကြောင်း Sleepbuds, kraudfandingovoy Indiegogo platform ပေါ်တွင်စုဆောင်းကုမ္ပဏီ၏တင်သည့်ဘို့လိုအပ်သည်။
အစည်းအရုံးစစ်ပွဲများ2မှာဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမားမရှိတော့ In-ဂိမ်းငွေကြေးကိုမဝယ်နိုင်
ဤရွေ့ကား, MMORPG ငါတို့သည်လောင်းကစားဝိုင်း၏ဒြပ်စင်ကိုရှာပါ။ မကြာသေးမီကဘယ်လ်ဂျီယံကနေအသုံးပြုသူများသည်အစည်းအရုံးစစ်ပွဲများ2အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံဘို့အတွက်ဂိမ်းငွေကြေးဝယ်ယူရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားမှစတင်ခဲ့သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံလည်းဂိမ်းအတွင်းဝယ်ယူမှုအောင်သည့်အခါမရွေးနိုင်နိုင်ငံတွေစာရင်းထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ArenaNet မပြုစုသူမဟုတ်သလိုထုတ်ဝေသူ NCSoft သေးဤအခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်. မဆိုမှတ်ချက်မပေးထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအများစုဖြစ်ဖွယ်ရှိသစ်ကိုဘယ်လဂျီယံဥပဒတွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ရာအမှား၏မေးခွန်းတစ်ခု, ဒါပေမယ့်ဂိမ်းပြုပြင်မွမ်းမံမဟုတ်ပါဘူး။
မှားယွင်းနေသည် Indie ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကသူတို့ဂိမ်းယူ-ချွတ်၏ကျော်ကြားမှုမှဦးဆောင်ထားပါတယ်
ကွန်ယက်အာကာသသေနတ်သမားအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာအတွက်ကစားသမားအရေအတွက် HyperReuts လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအနည်းငယ်ကလူကနေကြီးပြင်းလာတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင်ရေနွေးငွေ့အပေါ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာထွက်ပေမယ့်လက်တွေ့ဘယ်သူမှကစားနေသည်: လူများ၏ဂိမ်းထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်လက်ရှိအရေအတွက်ကလူအများဆုံးအရေအတွက်ကဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျာမနီမှာ IFA မှာတင်ဆက်ဆယ်ပါးကွန်ပျူတာတီထွင်မှု
နေ့တိုင်းကမ္ဘာကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းပညာဆိုင်ရာထိုးဖောက်အသစ်ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်များနှင့် Device ရဲ့အရေအတွက်ကဖန်ဆင်းသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ့ယုံကြည်မှုရှိသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါဟာအရာ, ဂျာမနီအတွက် IFA ပြပွဲများတွင်လျှို့ဝှက်၏ကုလားကာအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ - အစဉ်အလာဆောင်းဦးရာသီရဲ့အစမှာ - ထုတ်လုပ်သူများရောင်းချခြင်းအပေါ်သွားကြဖို့အကြောင်းကိုနေသော၎င်းတို့၏ဖန်တီးမှု, တခုအဖြစ်။
Mail.Ru Group မှအီးမေးလ်ကို updated ထားပါတယ်
အဆိုပါကုမ္ပဏီ Mail.Ru Group မှလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်များအတွက်အများဆုံးကျယ်ပြန့် update ကိုသူတို့ရဲ့ e-mail, စနစ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲနဲ့ undergone သာဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့်လည်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်။ မကြာမီ Mail.Ru နှင့်အတူအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သော features အသစ်များအနက်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်များကအက္ခရာများနှင့်အမြန်အဖြေတွေကို၏ "စမတ်" အာဆီယံ, ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှုကိုခေါ်။
မူလအစ Access ကိုဒေတာဘေ့စဂိမ်းဟာအထွက်တစ်နှစ်သုံးခု hits ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်
မူလအစ Access ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အသုံးပြုသူများကိုအသစ်သောဂိမ်းများကိုထုတ်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ အဆိုပါစာရင်းသွင်းသူရှိနိုင်ပါစီမံကိန်းများစာရင်း2ကြည့်ရှုလော့ဂိမ်းထဲသို့ဝင်၏ Darksiders III, ဤရဲတပ်ဖွဲ့အစောပိုင်းကကြောင့် Darksiders ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုဖို့စာကြည့်တိုက်ကဆက်ပြောသည်ယင်းတုတ်ဓါးများအသစ်တစ်ခုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် 2. ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့အသုံးပြုသူအုပ်စုကိုစီမံကိန်းကိုနှစ်ခုထက်ပိုသောမကြာသေးမီကထုတ် လုပ်. : ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနစ်၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒြပ်စင်နှင့်အတူရှာပုံတော်ဒီ2အကြှနျုပျသညျရဲ Simulator2နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပံ့ပိုးမှုပရိုဆက်ဆာ AMD ၏ Ryzen 3000 စီးရီးအားလုံး matplaty socket AM4, မခံ
AMD ၏ပရိုဆက်ဆာ၏ဂတိနေသော်လည်းအားလုံး AM4-matplatami နှင့်အတူဇင်2၏ဗိသုကာအပေါ် Compatibility ကို Ryzen ထိန်းသိမ်းရန်, အဖြစ်မှန်အတွက်သစ်ကိုချစ်ပ်များ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအခြေအနေကဒါ rosy မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အသက်အကြီးဆုံး motherboards CPU ကိုအဆင့်မြှင့်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြောင့် ROM ကိုချစ်ပ်များ၏ကန့်သတ်စွမ်းရည်မှမဖြစ်နိုင်တာပါလိမ့်မည်အရင်းအမြစ် PCGamesHardware ပါဝငျသညျ။
WebAssembly ဟက်ကာများက Intel အပေါ်မည်သည့်ကွန်ပျူတာထဲသို့ hack ဖို့ခွင့်ပြု
အဆိုပါဖြန့်ချိပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများရှိနေသော်လည်း browser များတိုက်ခိုက်မှု် Spectre နှင့်အရည်ပျော်ကျခြင်းမှအားနည်းချက်က Intel Processor များပေါ်တွင် အခြေခံ. ကွန်ပျူတာများကိုလုပ်မယ့် low-level က byte code ဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုနောက်ထပ် update ကို WebAssembly နည်းပညာ။ ဤသည်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Forcepoint ယောဟနျသ Bergbom တခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူများကဖော်ပြထားခဲ့သည်။ တစ်ဘရောက်ဇာကိုတဆင့်ကွန်ပျူတာ hacking အဘို့အ် Spectre သို့မဟုတ်အရည်ပျော်ကျခြင်းကိုအသုံးဖို့, တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးအလွန်တိကျသောအစီအစဉ်ကို timer နေရာမှာသုံးစွဲဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။